Maxaad iiga sheegi kartaa SEO ku saabsan Shirkadda maareynta hantida?
Maalmahan, SEO waa mid muhiim u ah dhammaan noocyada ganacsiga internetka, iyo hay'adaha maamulka maareynta guryaha ma aha mid ka reeban. Haddii aad rabto inaad kobciso shirkaddaada hantidaada, markaa waxaa aad loogu talinayaa in aad ku dartid SEO-gaaga istaraatiijiyada suuq-geynta.
At Semalt, waxaan had iyo jeer ka shaqeynaa fikradaha suuq-geynta websaydhka wanaagsan ee ganacsiga maareynta hantida. Maanta, waxaanu dooneynaa inaanu wadaagno farsamooyinka ugu waxtarka badan ee lagu xoojinayo SEO-gaaga. Talooyinkaani waxay kaa caawin doonaan inaad u bedesho website-kaaga soo booqdayaasha dariiqyada xooggan.
Si taxadar leh ula soco alaabta gurigaaga
Waxyaabaha ugu horreeya ee aan rabno in aynu ka hadalno waa boggaaga bogga hore ama ereyo kaleba alaabtaada bogga. Xasuusnow, waxay u baahan yihiin inay nadiif noqdaan, cad yihiin oo soo koobaan. Habka ugu fiican ee aad u habeysid qaabka bogga hore waa inaad u kala qaybiso afar qaybood oo muhiim ah. Takhasusleh khabiir ah ayaa soo jeedinaya in qodobada soo socda ay ku qoraan bogga hore:
Adeegyada Maareynta Hantida.
Hadafka ugu muhiimsan ee halkan waa in la kordhiyo taraafikadaaga iyadoo la yareeynayo qiyaasta qashinka iyo sii kordhinta waqtiga lagu kharash gareynayo goobtaada. Waa inaad fahamtaa in ay jiraan daraasiin dad ah oo booqanaya goobtaada maalin kasta. Dhammaantood waxay rabaan in ay noqdaan kuwa soo jiidasho leh oo sahlan in la raaco. Taasi waa sababta ay muhiimka u tahay in ay dadka siiyaan tilmaamo sahlan. Xasuuso, haddii aad isticmaaleyso qof kasta oo isticmaala aagga loo baahan yahay ee bogga internetka, waxaa jira walaac ka sareeya in ay waqti badan ku qaadan doonaan meeshii aad ka bixin lahayd khayraadkaaga.
Haddii aad rabto inaad ku darto waxyaabaha kale ee cuntooyinka, sida xiriirka warbaahinta, waa sax. Waxa kaliya ee la xusuusto: isku day in aad alaabtaas ku haysato bogagga kale ee ku yaal boggaaga. Sida aan kor ku soo sheegney, boggaaga hore waa inuu nadiif ahaadaa oo si sahlan u socdaa, sida ugu macquulsan.
URL Qaabdhismeedka Nidaamka
Samaynta qaab-dhismeedka URL-yada istaraatiijiga ah ee dhammaan bogagga bogagga had iyo jeer waa go'aan weyn. URL-yadaadu waa inay noqdaan kuwo muujiya oo sharaxaad leh. Maskaxda ku hay in marka URLyadu ay macno samaynayaan oo ay muujinayaan qiimaha shirkaddaada, makiinadaha raadinta waxay ku heli karaan si deg deg ah oo aad u hesho boosteejo fudud oo SEO ah.
Xooga saar Boggaga Degitaankaaga
Waa muhiim in la xuso in inta badan fursadaha ganacsi ee tooska ah ay ugu socdaan boggan. Sidaa daraadeed, waa inaad si fiican u sameysaa. Khubarada SEO ayaa qeexaya saddex walxo oo ay tahay inaad ku leedahay boggan si aad shirkaddaada guryaha uga dhejisid dad badan. Halkaan waxaa ah:
In kastoo tani ay u muuqato mid muuqata, waxaad la yaabi laheyd inta badan boggaga soo socda ee aan laheyn wax koobab, taas oo khaldan. Aan u maleyno inaad tahay shirkad maareynta hantida ee Florida, ka dibna cinwaanka SEO-ku-fiicneyn oo loogu talagalay boggaaga soo degaya waa inuu noqdo sida Florida Property Management Agency.
Macaamiishaada mustaqbalka waxay u baahan yihiin inay si degdeg ah kuu soo gaaraan, markaa hubi in lambarka taleefanku yahay muuqda. Ha qarin, halkii aad ku qori laheyd cinwaankaaga, si ay dadku awood ugu yeeshaan inay kula soo xiriiraan arrin ilbiriqsi.
Foomka Xiriirka Qaababka ah
Waa muhiim in aad dadka siiso qaab kale oo aan ahayn marka laga reebo telefoonka ay kugu xiri karaan adiga. Tixgeli foomka xiriirka 4-5 beerood. Weydii martida macluumaadka asaasiga ah, markaa way fududahay in ay bixiyaan macluumaadkooda.
Waxaad ku bilaabi kartaa kobcinta website-kaaga maareynta hantidaada hadda oo leh saddexdan talooyinkan SEO. Markaad iyaga la samayso, waad sii wadi kartaa adoo ku daraya marqaatiyaalka iyo soo bandhigida hay'addaada faahfaahinta faahfaahinta Source .